आजको राशीफलः २०७४ असोज १५ गते — Imandarmedia.com
आजको राशीफलः २०७४ असोज १५ गते
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ): विरोध गर्ने पनि समर्थनमा आउनेछन् । नोकरी तथा राजनीतिमा अवसरको खोजी हुनेछ । प्रयास र प्रयत्न सफल हुनेछन् । उधारो कारोवार नगर्नु होला । पराक्रम बढ्नेछ ।
वृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो): समयमा गरेका कामबाट लाभ लिन सकिनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आज पनि आम्दानी राम्रै हुनेछ । घर परिवारको सहयोग पाईनेछ । आस्था र विश्वास बढ्नेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा): अहार विहारका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । घरको वातावरण पनि प्रतिकुल हुन सक्छ । आफुले चाहे जस्ता काम गर्न सकिने छैन । भौतिक सम्पति नास हुन सक्छ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो): लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । अरुको भरमा काम नगर्नु बढि राम्रो हुनेछ । आर्थिक कारोवार गर्दा सजग हुन होला काममा विलम्ब नगर्नु होला । व्यापारबाट लाभ होला ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे): विरोधी बढ्नेछन् कार्य गोपनियता अप्नाई काम गर्नु होला । काम गर्दा बढि मेहनत गर्नु पर्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । आफन्तबाट अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
कन्या (टो, पा, पी, पु, ष, ण, ठ, पे, पो): भ्रमलाई चिरेर काम गर्नु होला । हेलचक्र्याई गरेर काम गर्नु भयो भने आएको अवसर पनि गुम्नेछ । यात्रामा कठिनाई हुनेछ । आम्दानी खर्च बरावरै जस्तो हुनेछ । मानसिक तनाव बढ्नेछ ।
तुला (रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते): भौतिक सम्पति नोक्सान हुन सक्छ । काम गर्ने जोश जागर घट्नेछ । घर परिवारमा मनमुटाव बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । साथि भाईबाट विश्वास घात हुनसक्छ ।
वृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु): कार्य क्षमता घट्ने छैन । व्यापार व्यवसायबाट पनि आय आर्जन बढ्नेछ । काम गरेर दाम कमाउने अवसर आउनेछ । घरका काम काजमा भन्द बाहिरी काम काजमा समय बढि लगानी हुनेछ ।
धनु (ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे): नजिकका मानिसबाट विश्वास घात हुनेछ । संचित धनको नास हुने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट खासै लाभ लिन सकिने छैन । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम भने केहि सफल हुनेछन् ।
मकर (भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि): समयमा निर्णय लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । गरेका काम सफल हुनेछन् । आत्मविश्वास बढाउनु पर्ने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट अल्प लाभ हुनेछ । महत्वकाँक्षी योजना असफल हुनेछन् ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा): कमाई भन्द पनि खर्च बढि हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा विभिन्न खालका समस्या आउनेछन् । नगरेका कामको अपयश आई लाग्न सक्छ । स्वास्थ्यले पनि काम गर्न दिने छैन । चिन्ता बढ्नेछ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि): वौद्धिक क्षेत्र कमजोर देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । मिलेर काम सकेसम्म नगर्नु होला । काममा ढिला गर्दा आफैलाई घाटा हुनेछ ।
२०७४ असोज १५ गते प्रकाशित
कस्तो छ तपाईको यो महिनाको ग्रह-दशा ? हेर्नुहोस् जेठको मासिक राशिफल
अाज कुन-कुन राशि भएकाहरुकाे भाग्य चम्किदैछ ? माघ २२ गतेको राशिफल
आजको राशीफलः २०७४ असोज १९ गते
आजको राशीफलः२०७४ असोज १८ गते
आजको राशीफलः २०७४ असोज १७ गते
आजको राशीफलः २०७४ असोज १६ गते
विश्वकप: स्वीजरल्यान्डद्वारा सर्बिया पराजित,
विश्वकप फुटबल: ब्राजिल दुई गोलले विजयी
हुण्डाईका चारजना ग्राहक विश्वकप हेर्न रसिया जाँदै